काठमाडौमा जताततै फोहोरको डङ्गुर, मस्त निन्द्रामा महानगर « Light Nepal
काठमाडौमा जताततै फोहोरको डङ्गुर, मस्त निन्द्रामा महानगर
Published On : 20 May, 2022 3:01 am
यशोदा भण्डारी/काठमाडौँ | महानगरको नेतृत्वमा पुग्ने जनप्रतिनिधि भने जनतालाई फोहोरको तमासा देखाएर यसैमा राजनीति गर्दै आएका छन्। अहिलेको काठमाडौको फोहारको समस्या त्यसैको नतिजा हो। यो अवस्थामा एउटा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छः यो फोहोरको राजनीति के अहिलेको चुनावपछि चुनिने नेतृत्वले अन्त्य गर्ला त ?
फोहोरको वैज्ञानिक विभाजन र व्यवस्थापन गर्दा यसबाट प्रशस्तै आम्दानी गर्न सकिने, रोजगारी सिर्जना हुने र जैविक मल तथा ऊर्जा समेत निकाल्न सकिने संभाव्यता पटक पटक अध्ययन भएको पनि छ। महानगरको नेतृत्वमा पुग्ने जनप्रतिनिधि भने जनतालाई फोहोरको तमासा देखाएर यसैमा राजनीति गर्दै आएका छन्। अहिलेको काठमाडौको फोहारको समस्या त्यसैको नतिजा हो। यो अवस्थामा एउटा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छः यो फोहोरको राजनीति के अहिलेको चुनावपछि चुनिने नेतृत्वले अन्त्य गर्ला त ? यो नागरिकको अपेक्षा पनि हो।